सत्ताधारी नेकपा : सहमति नभए पेलेरै ‘एकता’ गर्ने ओली–प्रचण्डको तयारी — Newskoseli
सत्ताधारी नेकपा : सहमति नभए पेलेरै ‘एकता’ गर्ने ओली–प्रचण्डको तयारी
काठमाडौं, ३ वैशाख ।
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को एकता टुंगो लगाउन अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीच सोमबार छलफल भएको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा तल्लो तहका कमिटीहरु टुंगो लगाउने विषयमा छलफल भए पनि सहमति जुटेन । वरिष्ठ नेता नेपालले मापदण्ड, विधि, प्रक्रिया र आधारका विषयमा नेतृत्व टुंगो लगाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । तर, अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्ड भने वैशाख पहिलो सातासम्ममा सहमति गर्ने, नभए ‘पेलेरै’ भए पनि नेतृत्वको घोषणा गर्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् ।
अध्यक्ष ओली र प्रचण्डबीच यस विषयमा पटक–पटक छलफल भएको छ । अहिलेसम्ममा नेकपाको सचिवालय, केन्द्रीय कमिटी र प्रदेश कमिटी मात्रै गठन भएका छन् । घोषणा भइसकेको प्रदेश कमिटीका विषयमा समेत ओली, प्रचण्ड र नेपालबीच विवाद कायमै छ ।
केन्द्रीय सदस्यहरूको जिम्मेवारी बाँडफाँट, पोलिटब्युरो गठन, विभागहरु र जनवर्गीय संगठनको एकता, जिल्लादेखि स्थानीय तहसम्मका कमिटी अझै गठन हुन नसकेको खबर सुभाष साहको बाइलाइनमा मंगलबारको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।
‘विनाधितो ऋण दिने’ सरकारी भ्रम ! विदेशबाट फर्केका १९ हजारको आवेदन, तर एउटैले पाएनन्…
८ महिनाको व्यापार घाटा झन्डै ९ खर्ब !
सत्ताधारी नेकपा : यसरी फुक्यो विवादको गाँठो, ६ महिनाभित्र सम्मेलन, १ वर्षभित्रै महाधिवेशन !
बिहे गरेको ५ दिनमै पुछियो सिर्जनाको सिउँदो
२२ हजार दरबन्दी थप्न प्रहरीको माग
प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने सेनाको तयारी